Göteborg: Nin loo heeysto dab ka dhacay guri ku yaala xaafadda Gårdsten | Somaliska
Xaafadda Gårdsten ee magaaladda Göteborg ayaa guri ku yaala waxaa ku dhintay afar qof saddex carruur ah iyo haweeney 35 jir ah, ka dib markii dab qabsaday dhismo ay daganaayeen. Booliska ayaa haatan ku tuhmaya nin la soo qatay inuu ka dambeeyo.
Xalay sagaalkii fiidnmo ayaa booliska ambalaasta gurmadka deg dega ah waxaa ay gaareen halkaas ka dib markii qof deriska ah wacay booliska oo ku wargeliyey. Dab damista oo qasab ku galay guriga oo gubtay ayaa ugu tagay islaan iyo saddex carruur ah, labadan carruurta ahaa midna ku geeriyooda ambalaasta dhexdeeda intii loo sii waday isbitaalka halka mid kalena uu ku dhintay isbitaalka. Labbo kale oo carruur oo ku sugnaa guriga dabka qabsaday ayaa laga soo bad baadiyey.
Thomas Fuxborg, oo u ah xogheynta warfaafinta ee deegaanadda Galbeed ayaa sheegay labbo carruur ah oo kala ah 2 iyo 8 jir aanu u dhiman dadka qabsaday guriga ee ay jiraan fal dembi oo halkaasi ka dhacay ka hor intii aannu qabsan dabka. Waxaa uu sheegay oo kale in ay runsan yihiin in dil tacadi ah loo geeystay saddexdaas ruux.
Xeer Illaaliyaha ayaa amray in la siiyo ninkaas tan iyo inta baaristu socoto. Boolisku waxaa ay sheegeen in dabka qabsaday guriga uu ku ekaa hal qol oo keliya, taasina ay shaki ku dhalisay. Booliska ayaa sidoo kale weli baaritaan haya iydaoo ninka eedeysanaha ah uu iska fogeeyey eeda loo heeysto.
Fadlan mesha ah 9 fiidnimo ka badala waa 9 subax nimo